Fitness Rebates inotora chikamu muCJ (Commission Junction), ShareASale, uye Clickbank zvakabatana zvirongwa, uye zvinogona kubhadharwa kana iwe ukatenga chigadzirwa / sevhisi kana kusaina-up kwechipo mushure mekudzvanya chinobatana chinongedzo kubva kune iyo Fitness Rebates webhusaiti. Ongorora: Iyo Commission Junction & ShareASale yakabatana zvirongwa zvinokurudzira huwandu hukuru hwezvakasiyana zvigadzirwa uye kana masevhisi kubva kunhamba hombe yemakambani akasiyana.
Google, semutengesi wechitatu, inoshandisa makuki kushambadzira pawww.fitnessrebates.com. Kushandiswa kweGoogle kweDART kuki kunoigonesa kushambadzira kune vashandisi zvichibva pakushanya kwavo ku www.fitnessrebates.com uye mamwe masosi paInternet. Vashandisi vanogona kusarudza kushandisa iyo DART kuki nekushanyira Google kushambadza uye zvemukati network zvakavanzika mutemo pane inotevera URL - http://www.google.com/privacy_ads.html